“Oromoo Bulchiinsa Naannoo Hararii Jala Jiru Maal Gochuu Qaba? – Welcome to bilisummaa
“Duraan dursee harariin akka naannoo tokkootti ijaaramuu hin qabdu. Heera biyyaa Itiyoophiyaa cabsuun hundeeffamte. Harariin maallaqa miiliyoona hedduufi dhalaashii gaggeessitoota Tigreef kennuun akka naannootti dhaabbatte. Itti yaadame Saamooraafi Mallasi akka Oromiyaan ciccitu taasisuuf raawwatan. Biyya lafaaratti waan yaadamuu hin dandeenyetu raawwate.
“Lakkoofsi sab lammiilee naannoo Hararii keessaa jiran Oromoo xiqqeesanille ammas (56.41%) kanaan dursaa jira.
“Rakkoon suukanneessaa Oromoota naannoo Hararii keessaa jiraataniirra gahaa kan jiran hanqina heeraafi seera akka ta’etti ilaaluun dogongora guddaadha. Yaanni namoota hedduu fooyya’insa heeraa naannoo Hararii keessaatti sabni keenya hirmaachuun faayidaasaa eegsifachuu qaba jechaa jiru. Yaadaa qajeelaa ta’uu danda’a. Rakkoon suukanneessaa saba keenyarraa kan gahe hanqina heeraarraa madde yaada jedhu qabachuun sirrii hinfakkaatu. Heerrii naannichaa “Biyyoolessa Hararii fi DhDUO Waliin Bulchuu” jedha. Oromoo (56.41%)fi Harariin (8.65%). Osoo Heerri, seeronniifi dambiin duraan jiran keessaa hangi xiqqoo hojiitti jijjiiramanii balaan sukanneessa hawaasa keenya hin nyaatu ture. Dhiibbaan suukanneessaa hawaasa keenyarra gahe itti yaadamee, karooran kan dalagameedha malee, dogoggoraan kan dalagamee miti. Kana kan nama jechisiisu gocha waggoottan 27 darba keessaatti raawwataman kan armaan gadii akka fakkeenyaatti ilaaluun gahaadha.
“Maqaa shororkeessaan Oromoota hedduu tikee Tigree waliin ta’uun dhabamsiisaniiru,
“Hawaasa keenyaa carra diinagdee kamirraa qoqqobuun sablammii bicuu waliin ta’uun exportif import namoota taasisan rukuchiisuu turaniiru fkn (Bunaafi jimaa magaalaa hararii, dirree dawaafi hanga finfinneetti)
“Kanaafuu, sabni keenya fooyya’iinsaa heera hararii dhiifnee, filannoo jiran hundaa duguugee itti fayyadamuu qaba malee akkuma durii humnaan waanjoo garbummaa baachuu hin qabu. Filannoo jiran keessaa:-Sagalee rifrendemii gaggeeffamuun dirqama ta’a. Heerri biyyitti (Itiyoophiyaa) osoo hin tuqamiin sagaleen rifreendamii Hararii waliin jiraachuufi dhiisuu murtaa’uu qaba. DhDUOn gaggeessitoota marii kanaaf ergan hubannoo kana qabaachuu qabu. Yoo riifreendemiin gaggeeffame lafti Jogoliifi lafa murtaa’ee qofaatu hafa. Fkf:-
“Uumman Oromoo Ammaarreessa hanga aratanya,
“Akka barbaachisumaasaatti ilaaluun Jogolii alatti magaala guutuu akka sagaalee kennu taasisuun lafa Oromoo deebsuudha.
“Filannoon Dhumaa kun Maaliif barbaachisee?
“Adareefi sablammii bicuu saammitii diinagdee waggoottaan 27 darban waliin hawaassi Oromoo Hararii keessa jiraatan carraan itti dorgoman hin jiru. Hojmaata jajallaa halkan Omishuun duguuggaa sabaaafi lafa keenyarratti akeekamurraa maqisuuf,
“Rakkoo Fiduu Danda’u:
“Haala siyaasa amma jirurratti ololli heeraatu diigamee jedhutu ka’a,
Hawaasa Oromoo diinagdee keessaatti hirmaachisuun fayyadamoo taasisuu.”
Previous ሰሞኑን በሕግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን በተመለከተ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ መግለጫ
Next Senior military and intelligence officers arrested